एटीएमलाई सुरक्षित रुपमा कसरी प्रयोग गर्ने ? - Gokarna News from Nepal
एटीएमलाई सुरक्षित रुपमा कसरी प्रयोग गर्ने ?
काठमाडौं– शनिवारदेखि अधिकांश बैंकको एटीएम सेवा बन्द भएका छन् । चाड पर्व नजिकिँदा गएको बेलामा एटीएम सेवा बन्द भएपछि धेरै एटीएम प्रयोगकर्ताहरु हैरान भएका छन् ।
एटीएम नचलेपछि हैरान भएका कतिपय ग्राहकलाई किन एटीएम चलेन भन्ने लागेको होला । धेरैले यसबारे जानकारी नपाएको पनि हुन सक्छ । प्रहरीले शनिवार राति दरबारमार्ग र ठमेल क्षेत्रका एटीएमबाट पैसा चोरी गरिरहेका पाँच जना चिनियाँ ह्याकरलाई पक्राउ गरेको छ ।
उनीहरुको साथबाट करिब १ करोड २७ लाख नेपाली रुपैयाँ र करिब १० हजार अमेरिकी डलर बरामद भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाका अनुसार एनआईसी एसिया र प्रभु बैंकको एटीएम सर्भर डाउन भएको छ भने अन्य बैंकको एटीएममा पनि समस्या आएको छ ।
एटीएममा देखिएको समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको निरौलाले बताए । नेप्समा आबद्ध भएका १५ बाणिज्य बैंकको एटीएम बन्द भएको स्रोतको दाबी छ । स्वीट्जरल्यान्डको नेप्स नामक सर्भिस प्रोभाइडरसँग नेपालका १५ बैंक आवद्ध रहेको बताइएको छ ।
यसअघि पनि नक्कली एटीएम कार्डको प्रयोग र पीन नम्बर प्रयोग गरी धेरै एटीएम प्रयोग कर्ताको रकम ह्याकरहरुले चोरी गरेको समाचार बाहिरिने गरेको थियो भने यस्तो कार्यमा संलग्न केहीलाई प्रहरीलेसमेत प्रकाउ गरेको थियो ।
कसरी राख्ने सुरक्षित ?
– पछिल्लो समय नेपालमा एटीएम प्रयोगकर्ताहरुको संख्या निकै बढेको छ ।
–एटीएम कार्डको प्रयोग गर्नेले पहिला आफूले प्रयोग गर्ने एटीएम मेसिनमा राम्रो सँग हेर्नुपर्छ ।
– कसैले नदेख्ने गरेर पिन कोड हान्नुपर्छ
– पैसा आएपछि राम्रोसँग लगआउट नभएसम्म हिँड्नु हुँदैन ।
– रकम आएको स्लिपसमेत त्यत्तिकै फ्याक्नु हुदैन, त्यसलाई च्यात्नुपर्छ ।
– कार्डको पिन नम्बर ‘स्ट्रोङ’ खालको राख्नुपर्छ । आफूलाई सम्झन सहयोग हुन्छ भने जन्मदिन वा मोबाइल नम्बर, घर नंको प्रयोग नगर्नुहोस् ।
– कार्डको पिन नं त्यसको कभरमा नलेख्नुहोस्, र मोबाइलमा पनि सेभ नगर्नुहोस् । यदी मोबाइल चोरी भयो भने त्यसको दुरुपयोग हुने खतरा रहन्छ ।
– आफ्नो पिन नम्बर अरु कसैलाई पनि नदिनु होला ।
– निकै भीडभाड या सुनसान क्षेत्रको एटीएम उपयोग गर्नबाट बच्नुहोस् ।
– धेरै जसो बिग्रिरहने, ह्याङ हुने, नेटवर्क समस्यावाला एटीएमको प्रयोग नगर्नुहोस् ।
– आफ्नो एकाउन्टलाई मोबाइल एलर्टमा राख्नुहोस् । जब तपाईको खाताबाट पैैसा निकालिन्छ तब तपाइको मोबाइलमा म्यासेज आउन सकोस् । यदी तपाईले एटीएम प्रयोग नगरेको बेलामा पनि म्यासेज आयो भने तत्काल बैंकमा सम्पर्क गुर्नहोस् ।
–सकेसम्म जुन बैंकको कार्ड हो त्यही एटीएममा मात्र प्रयोग गर्नुहोस् ।